Ihe Omume nke Klaasị na AOL GA-enyere Nzuzo | Martech Zone
Iwu Omume klaasị na AOL GA-enyere Nzuzo
Na Tọzdee, Septemba 26, 2006 Douglas Karr
Carlo na Techdirt nwere otu isiokwu banyere otu klas ihe ikpe ga-emerụ ma ghara inyere ụlọ ọrụ ahụ aka. Amaghị m na Carlo ga-ekwenye ma ọ bụrụ ya data o nyere AOL ma weputa ya site na ntaneti. Ọ na-eche na Google na Yahoo! na-esote ma nke a bụ okwu 'ọchụchọ'.
Ọ bụghị okwu 'ọchụchọ' ma ọlị, ọ bụ nsogbu 'ọrụ'. N'oge a, ndị omempụ na-enuga na ịntanetị iji weghara ma jiri ozi nkeonwe ndị mmadụ weghara njirimara ha maka ebumnuche megidere iwu. E nyefere ụlọ ọrụ data anyị ma chebe ya. Ọ bụghị naanị na AOL chebe ya, ha chụpụrụ ya ebe onye ọ bụla nwere ike ịchọta ya!
Maka ndị ọka iwu inweta ego niile, ọ bụghị gbasara onye na-enweta ya. Ọ bụ banyere onye na-akwụ ya. Ndị ụlọ ọrụ enweghị mmadụ, ha enweghị akọnuche, naanị ọrụ ha nwere bụ ịkpata ego maka ndị na-ere ngwaahịa. N'ihi ya, naanị tozọ iji taa ụlọ ọrụ ahụhụ ma mee ka ha gbanwee ụzọ bụ ịgba ha akwụkwọ maka oke ego.
Ekwenyere m na ikeketeorie na m na-emegide iwu na-enweghị isi. Ọbụna m kwenyere na ọ dị mkpa inwe iwu etinyere ka onye na-efu ya kwụọ ụgwọ niile metụtara uwe na-enweghị isi. Ma nke a abụghị otu n’ime ha. Ọ bụrụ na AOL gbadata ike n'ihi nke a, mgbe ahụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ ga-ama ma tinye nchekwa dị mkpa iji kpuchido nzuzo anyị.
Anyị na-akwụ ụgwọ maka ọrụ ha. Ha na-erite uru na data anyị. Ha kwesiri ịza ajụjụ.